I-China Itshekisa imishini yokulayisha igesi ngaphambi kokusika inqubo abakhiqizi bengilazi eluhlaza nabaphakeli | Fuzuan
Ukutshekisa imishini yokulayisha igesi ngaphambi kokusika inqubo yengilazi eluhlaza
Uhlobo: Umshini wokulayisha wengilazi
Ingilazi Iyadingeka: Ingilazi eluhlaza, ingilazi engenalutho
Inombolo yomthetho: FZGLM-3624
Usayizi Wengilazi Omkhulu: 3600*2400 mm Ubuncane Bengilazi Usayizi: 1250*1000 mm
Ubukhulu bengilazi: 1.6 mm - 4 mm
I-Glass Conveyor Level: 900mm±25mm
Ukujula okukhulu kokumunca: 630 mm
Isiteshi sokusebenza: Isiteshi esingu-1 (Esingokwezifiso)
Isiteshi sokulayisha ingilazi: iziteshi ezi-1 noma ezi-2 (Ezingokwezifiso)
Amandla: 20-25 s/pc
Ukusetshenziswa: Ukulayisha ngokuzenzakalelayo ama-rack amashidi esitoreji endaweni evundlile yenqubo yokusika.
Lo mshini wokulayisha ingilazi usetshenziselwa ukuhlukanisa ngokuzenzakalelayo ingilazi emi ngokuqondile kusukela kuhlaka lwengilazi ibe ishidi elilodwa, futhi iguqulwe ibe yisimo esivundlile, futhi idluliselwe etafuleni lokusika ngokuzenzakalelayo ngokusho kwesignali.
Esigabeni sokuqala somugqa wokukhiqiza ingilazi yezimoto, ingilazi eluhlaza izophathwa kuma-conveyors ukuze kuqalwe ukucutshungulwa kwangaphambili, lo mshini wokulayisha uwumshini wokugcwalisa ingilazi otshekisayo, usetshenziswa kakhulu ukulayisha amashidi engilazi ngokuzenzakalelayo kusuka kuma-racks okugcina ame aqondile. ngezinhlangothi zombili futhi iwatshekisela ngokuzenzakalelayo endaweni evundlile yenqubo yokusika. Izingalo ezilayishayo zifakelwe izinkomishi zokumunca kanye nomshini osebenza nge-hydraulic system.
Imoto ilayisha ingilazi eluhlaza
Le mishini yokulayisha ingilazi ye-Tilting ifanele imigqa ehlukahlukene yokucubungula ingilazi.
Umthamo we-FZGLM-3624: 20-25 imizuzwana/pc (Ezingokwezifiso)
Lo mshini wokulayisha ingilazi ye-Automotive yomugqa wokusika wakhiwe ikakhulukazi
● Isiteshi sokulayisha (iziteshi ezi-1 noma ezi-2 ezenziwe ngokwezifiso)
I-Glass A ifremu iwuhlobo lweselula lwe-dual-silo, ihlukaniswe yaba indawo engu-1# nendawo engu-2#, indawo ngayinye ingagcina izingcezu zengilazi ezingafika ku-200.
● Uhlaka Lokulayisha Oluyisisekelo
Uhlaka luhlanganiswe ngokuhlanganyela ne-Q235 square tube material, ukuze kube nezisekelo eziqinile.
● Indlela yokuhumusha
Ithatha injini egiyelwe ukuhamba kumhlahlandlela womugqa, futhi isivinini siyalungiseka.
● Indlela yengalo etshekisayo
Yamukela i-motor ehlosiwe kanye namasethi amaningi ezindlu ezithwalayo ezixhunywe ngokuqondile ukushayela imodi yokujikeleza, futhi isivinini siyalungiseka.
● Isistimu ye-vacuum yengilazi
Isebenzisa amasethi amaningi ezinkomishi zokumunca i-vacuum, amaphampu e-vacuum, amamitha e-vacuum kagesi, nezindlela zokulawula amavalvu womoya osebenza ngomshayeli.
● Amabhande esikhathi kanye nokuvikelwa ngamakhava okuphepha.
Ubukhulu Bengilazi Usayizi 3600*2400 mm
Ubuncane Bengilazi Usayizi 1250*1000 mm
Ukujiya Kwengilazi 1.6mm–4 mm
Ukuphakama kweConveyor 900mm +/- 25 mm (Okwenziwe ngokwezifiso)
I-Glass Loading Position Isiteshi sokulayisha esi-1 noma ezi-2 (Ezingokwezifiso)
Ingcindezi yomoya ocindezelwe 0.4-0.6 Mpa
Isicelo sengilazi Ingilazi eyisicaba
● Isebenzisa ukwakheka kwe-flip, isikulufu se-motor siyaphakanyiswa futhi sehliswe, futhi ukusebenza kuzinzile. Iyakwazi ukubona ukukha okuzenzakalelayo kanye nokudlulisa okuzenzakalelayo kobukhulu obuhlukahlukene bengilazi.
● Isilayishi singakhetha ukulayishwa kwengilazi yamazwe amabili eziteshini eziningi, futhi sibone ukusebenza kokukhetha okuzenzakalelayo kwama-rack amaningi engilazi ecacisiwe ehlukene ngesikhathi esisodwa.
● Into esetshenziswayo inemisebenzi emibili yemodi ezenzakalelayo kanye nemodi eyenziwa ngesandla yokukhetha.
● Iletha lula ezindleleni zendabuko zokucubungula ingilazi futhi yonga izindleko eziningi zabasebenzi emabhizinisini. Ukusebenza kulula futhi kulula, futhi ukusebenza kuzinzile, okungagcini nje ngokusindisa izindleko ohlelweni lokukhiqiza lwebhizinisi, kodwa futhi kuthuthukisa izinga lomsebenzi.
Okwedlule: Ilogo Printing Machine Car Window Glass Trademark Printer
Olandelayo: I-Robot Gass yokulayisha uhlelo lwengilazi eyisicaba yezimoto
I-Robot Gass yokulayisha uhlelo lwe-automotive flat g...
Imishini yokulayisha ye-Servo ye-Bando Pre-processing...